अमेरिका पक्राउ नेपाली काँग्रेस पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड प्रधानमन्त्री प्रचण्ड केपी शर्मा ओली नेकपा चितवन नेपाल प्रहरी मृत्यु सरकार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी अपराध राशिफल
सुनको मूल्य ५ सय रुपैयाँले बढ्यो
डलरदेखि रियालसम्मको आज कति छ भाउ ?
उत्पादन पर्यटन पूर्वाधार/विकास बैंक / बित्त रोजगार
फेरि बढेयो सुनको मूल्य, तोलाको कति पुग्यो ?
काठमाडौं, १० माघ। नेपाली बजारमा शुक्रबार सुन प्रतितोला २ सय रुपैयाँले बढेको छ। बिहीबार ७५ हजार रुपैयाँ प्रतितोलामा कारोबार भइरहेको छापावाल सुनको मूल्य आज २ सय रुपैयाँले बढेर प्रतितोला ७५ हजार २ सय रुपैयाँ कायम भएको छ । त्यस्तै तेजावी सुनको…
सुनको मूल्य पूनः उकालो लाग्यो, तोलाको कति ?
काठमाडौं, ९ माघ । सुनचाँदीको मूल्य बिहीबार पुनः उकालो लागेको छ। अघिल्लो दिन सामान्य ओरालो लागेको सुनको भाउ आज पुनः बढेको हो। अन्तर्रा्ष्ट्रिय बजार पच्छयाउँदै बिहीबार स्थानीय बजारमा छापावाल सुनको मूल्य तोलामा २ सयले बढेर ७५ हजारमा कारोबार…
विदेशी मुद्राको विनिमयदर, आज कुन देशको कति ?
काठमाडौं, ८ माघ । बुधबारको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको विदेशी मुद्राको विनिमयदर अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर ११३.६३ रुपैयाँ र बिक्रीदर ११४.२३ रुपैयाँ रहेको छ। यस्तै युरो एकको खरिदर १२६.२२ रुपैयाँ र बिक्रीदर १२६.८९ रुपैयाँ रहेको छ भने…
काठमाडौं, ८ माघ। बुधबार सुनको मूल्य घटेको छ। मंगलबार तोलामा ७५ हजार ३०० रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाल सुनको मूल्य बुधबार नेपाली बजारमा तोलामा ७४ हजार ८०० रुपैयाँमा कारोबार भएको हो। यस्तै तेजावी सुन तोलामा ७४ हजार ५०० मा कारोबार भएको छ।…
चितवनमा नायिका शर्माद्वारा केटीएम र अण्टा शोरुमको उद्घाटन
चितवन, ८ माघ । स्क्वाड नेपाल प्रालिले चितवनको भरतपुरमा रहेको सीजि लेण्डमार्कमा स्वदेशी गुणस्तरिय ब्राण्ड केटिएम सीटि तथा बहुचर्चित विदेशी ब्राण्ड अण्टाको शोरुमको शुभारम्भ गरेको छ। शोरुमको नेपाली चलचित्रकी चर्चित नायिका पूजा शर्माले रिबन…
काठमाडौं। नेपाली बजारमा मंगलबार सुनको मूल्य बढेको छ। आज सुन तोलाको ७५ हजार ३ सयमा कारोबार भइरहेको छ। सोमबारको तुलनामा सुन ३ सयले बढेको हो। नेपाली सुन चाँदी व्यवसाय संघका अनुसार आज बजारमा तेजावी सुन तोलाको ७५ हजारमा कारोबार भइरहेको छ।…
मेगा विन्टर शुज मेला ७५ प्रतिशत छुट
काठमाडौं। राजधानीको भृकुटीमण्डप प्रदर्शनी स्थलमा 'मेगा विन्टर शुज मेला' सुरु भएको छ। माघ ५ गतेदेखि सुरु भएको मेलामा चर्चित ब्राण्डका १ हजारभन्दा बढी मोडलका जुत्ता चप्पल प्रदर्शनी राखिएका छन्। मेलामा नेपालमा चलेका प्रतिष्ठित ब्राण्डका…
काठमाडौं, २ माघ। बिहीबार नेपाली बजारमा सुनचाँदीको मूल्य स्थिर रहेको छ। बुधबार तोलामा ७४ हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको सुनको मूल्य बिहीबार पनि सोही मूल्यमा कारोबार भएको हो। यस्तै तेजावी सुन ७४ हजार ४०० मा कारोबार भएको छ। यस्तै चाँदी…
भारतले पाम आयल आयात रोकेसँगै व्यापार घाटा पुनः बढ्ने
काठमाडौं, २७ पुस। भारतले पाम आयात रोकेसँगै नेपालको व्यापार घाटा भने पुनः बढ्ने देखिएको छ।पछिल्ला केही महिना देखि नेपालको निर्यातमा केही सुधार आई व्यापार घाटा केही घट्दै गएको देखिएको थियो। यसमा मूख्य कारण पाम आयल निर्यात नै रहेको थियो।…
काठमाडौं, २७ पुस। सुनको मूल्यमा आज सामान्य वृद्धि भएको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज सुनको मूल्य प्रतितोला ४०० ले वृद्धि भएको हो। महासङ्घले आजका लागि छापावाला सुनको मूल्य प्रतितोला रु ७५ हजार र तेजाबी सुनको मूल्य प्रतितोला…